Disemba 2021 - ibe obibi
by Ọrụ Asụsụ America
Afọ ọzọ gafere N'ezie, Disemba bụ mgbe ọnwa ikpeazụ ga-emechi afọ, agbanyeghị afọ abụọ gara aga ejiriwo ihe dị iche iche na ihe a na-atụghị anya ya na mmechi na-emechi n'ihi ọrịa Corona. Ụdị ọhụrụ a na-akpọ Omnicom abanyela n'ụwa ma onye ọ bụla na-emegharị ọzọ. N'ozuzu, 2021 abụrụla afọ dị mma na ọmarịcha nlọghachi azụ site na 2020 siri ike. N'agbanyeghị nke a, ma ọ bụ ikekwe n'ihi nke a, ọ dị mkpa ịtụgharị uche ma mee ememe anyị rụzuru nke afọ a. Disemba na-enye ohere zuru oke maka nke ahụ yana enwere ọtụtụ ebe anyị nwere ike ime ememe ndụ ma tụgharịa uche n'ihe ndị dị mma anyị na-eleghara anya mgbe ụfọdụ. Anyị nwere ike ibido na Hanukah sochiri ekeresimesi na afọ ọhụrụ n'etiti ndị ọzọ. Ka 2021 na-abịa na njedebe, anyị nwere olile anya na ihe ndị ka ukwuu na nke na-egbuke egbuke na-echere anyị n'ọdịniihu na nje Corona na-enwetakwa nchịkwa ọzọ.
Enweela ọtụtụ ihe ama ama mere n'ọnwa a ma a bịa na akụkọ ntolite ụwa. Iceland na Spen bụ mba abụọ nwere nnwere onwe. Ụlọ ndị Commons nke Britain hụrụ onye otu nwanyị mbụ ya - Lady Nancy Astor. Iji gbalịa igbochi agha ụwa ọzọ, France, Belgium, na Germany bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta Locarno na December 1, 1925. A họpụtara Benazir Bhutto ịghọ praịm minista Pakistan, na-eme ka ọ bụrụ nwanyị mbụ chịa mba ndị Alakụba. Na France, Pope Pius VII chiri Napoleon Bonaparte eze ukwu. O wee gaa n'ihu imeri Russia na Austria na Agha Austerlitz.
Disemba ekerekwala òkè dị ukwuu maka akụkọ ihe mere eme America. Enwere ọtụtụ mgbanwe mgbanwe mere n'ime ọnwa a. Njide nke Rosa Parks butere ọmụmụ nke otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo America nke oge a. Onye isi ala James Monroe webatara “Monroe Doctrine” nke machibidoro ọchịchị ndị Europe ga-achị America ọzọ. Ọ hụkwara mkpochapụ nke ịgba ohu dị ka iri na atọth kwadoro mmezigharị. Ụlọ ndị nnọchi anya US nwekwara ugbu a onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye America mbụ ya - Joseph Hayne Rainey.
Ihe omume ndị ọzọ ama ama gụnyere: mmeghachi omume nzụkọ nuklia mbụ gara nke ọma nke ụwa site n'aka Enrico Fermi na ndị otu ya na Mahadum Chicago, etinyere obi artificial nke mbụ na-adịgide adịgide na Mahadum Utah, nchọpụta Haiti site n'aka Christopher Columbus, na ntọala nke AFL. -CIO nke ghọrọ onye na-akwado ndị na-akwado ndị otu ndị ahịa America, si otú a kwụsị asọmpi afọ 20 na ibe ha.
Ụbọchị ọmụmụ nke ndị ama ama na Disemba:
Disemba 5, 1901: Walt Disney: A maara ya dị ka onye ọsụ ụzọ nke ụlọ ọrụ ihe nkiri America. N'ịbụ onye webatara ọtụtụ ndị ama ama gụnyere Mickey Mouse, ọrụ ihe nkiri ya ka na-egosi ma na-emegharị ya ruo taa. Ọ bụkwa onye mepụtara ogige ntụrụndụ dịka Disneyland na Disney World.
Disemba 10, 1830: Emily Dickinson: A na-ewere ya dị ka otu n'ime ndị isi 19th narị afọ American uri . A maara Dickinson nke ọma maka amaokwu izizi ya nkwuwa okwu, nke pụtara maka mkpakọ epigrammatic ya, na-akpasu olu nke onwe ya na ịma mma.
Disemba 9, 1608: John Milton: Onye England na-ede uri na onye nwere ọgụgụ isi, Milton, emetụtala ụwa agụmagụ nke ukwuu. A maara ya nke ọma maka Paradaịs Lost, bụ́ nke ọtụtụ ndị na-ewere dị ka uri epic kasịnụ na Bekee. E wezụga n'ịbụ onye dere ọtụtụ uri ndị ọzọ dị ịrịba ama, Milton dekwara akwụkwọ akụkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akpali akpali nke metụtara echiche Bekee na proce ruo ọgbọ.
Disemba 8, 1886: Diego Rivera: A na-ewere ya dị ka otu n'ime Muralist kasị ukwuu n'oge niile. Diego bụ onye na-ese ihe nkiri Mexico ama ama na 20th narị afọ. Rivera nwere mmetụta dị ukwuu na ụwa nka ụwa. A na-akwado ya maka iweghachi eserese fresco n'ime nka na ihe owuwu ọgbara ọhụrụ. Ọ lụkwara onye ọzọ na-ese ihe nkiri Frida Kahlo.
Ụfọdụ na-akpali mmasị, Ntụgharị asụsụ, Ọrụ Mgbasa Ozi & Ntụgharị Asụsụ Emechara na Disemba
Disemba bụ ọnwa kacha arụ ọrụ nke ọma, juputara n'ọtụtụ ọrụ nke kpuchiri ọrụ dịgasị iche iche n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na asụsụ. Nke ngalaba ntụgharị okwu na-aga n'ihu na-ahụ mmụba na-adịru mgbe niile na ntụgharị asụsụ Virtual & Na saịtị. Nke a bụ n'ihi ọtụtụ ihe, ma n'ozuzu, anyị na-eche na azụmahịa obi ike nke akụ na ụba na-enweta ngwa ngwa, na nke a na-eme ka a ripple mmetụta nke positivity.
Banyere ntụgharị asụsụ, anyị nyere ndị kasị ibu n'ụwa na-ere ahịa nsụgharị akụrụngwa mejupụtara 20 ụlọ ntu, ọtụtụ puku headsets na multiple venues na teknuzu staffing nke 12 audio ọkachamara maka 5-ụbọchị ogbako na Las Vegas nke gụnyere 50 nsụgharị na 8 asụsụ. Maka ogbako nke otu mba na-enye mmerụ ahụ na ọgwụgwọ ahụike uche maka ndị mmadụ n'otu n'otu, anyị nyere ụbọchị 3 ntụgharị asụsụ ogbi na saịtị.
Anyị wetakwara ndị ntụgharị okwu, ndị ọrụ nka na akụrụngwa ntụgharị asụsụ 2 Spanish na saịtị maka ụbọchị 7 nkuzi mmanye iwu na Puerto Rico nke gọọmentị US tinyere. Maka International Standard Organisation nke mba Europe, anyị wetara nkọwa ndị Korea site na vidiyo maka nyocha ụbọchị 4 na nyocha nke ụlọ nrụpụta. Anyị na-elekọta ndị ntụgharị asụsụ mebere 2 maka ụbọchị 4 nke ntụgharị asụsụ Ukraine n'otu oge maka ụlọ ọrụ gọọmentị isi. Ọrụ ọzọ dị mkpa maka ọnwa Disemba gụnyere ụbọchị 2 nke ntụgharị asụsụ Spanish nwere asambodo gbasara saịtị maka nnwale maka USDOJ na Washington DC.
na multi-media ubi, anyị nyere Arabic voiceover na subtitling nke 40 bio-chemical ọzụzụ vidiyo gbasara mmanye iwu maka isi ọchịchị ụlọ ọrụ. Anyị dechara nnukwu ndegharị, ntụgharị asụsụ na ọrụ olu maka DOD, site n'otu n'ime ndị na-enye NGO nke gọọmentị anyị. Ihe oru ngo a gụnyere vidiyo 24 ka edegharịrị ma tụgharịa gaa na Spanish, French & EU Portuguese, site na ihe karịrị awa 13 nke ọdịyo, yana oge ngwụcha izu 5–6. Ọkọlọtọ nnyefe nke nha a na-ewekarị izu 12-14. Anyị degharịrị ihe karịrị awa abụọ nke ọdịyo Spanish gaa na Bekee maka onye ọka iwu US n'okwu ikpe mpụ.
Anyị ngalaba ntụgharị asụsụ na-aga n'ihu na-enye ọtụtụ ọrụ dị iche iche maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. N'ime ọnwa Disemba, anyị tụgharịrị nyocha na mgbakwunye maka ọrụ okwu 260,000 n'asụsụ 13 maka usoro ụlọ ọgwụ mahadum steeti kacha ukwuu na mba ahụ. Asụsụ ndị a gụnyere Chinese Simplified, Arabic, Armenian, Spanish, Vietnamese, Tagalog na Russian. Maka ndị anaghị akwụ ụgwọ gbasara iwu zuru ụwa ọnụ, anyị tụgharịrị akwụkwọ nwere okwu 25,000 na Farsi gbasara ọgbụgba ndụ na mgbakọ.
Anyị sụgharịkwara akwụkwọ ntuziaka ụmụ akwụkwọ nwere okwu 20,000 gaa na Bengali maka ụlọ ọrụ ọzụzụ aka ọrụ na mba niile. Ọrụ ọzọ dị mkpa nke anyị gụnyere ntụgharị ihe karịrị otu narị puku okwu nke ozi COVID 19 emelitere maka ụfọdụ ụlọ ọrụ nlekọta ahụike kacha ukwuu na mba niile.
Emere akwụkwọ a sụgharịrị n'ihe karịrị asụsụ 15 gụnyere Hindi, Hakha Chin, Nepali, Punjabi, Tongan, Spanish, Chinese na ndị ọzọ. N'ime ọnwa a, anyị tụgharịrị asụsụ ọtụtụ ihe nyocha ahịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị gụnyere nyocha, ajụjụ ajụjụ na ajụjụ ọnụ na German, Thai, Malay, Hungarian, Czech na Spanish maka ụlọ ọrụ nyocha ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba. Maka ikpe nwere nnukwu ụlọ ọrụ iwu ama ama na mba anyị tụgharịrị wee kwado akwụkwọ iwu nke okwu 10,000 na-aga site na French gaa Bekee.
AML-Global na-anwale ule nke oge n'inye nsụgharị, nkọwa, ntụgharị na ọrụ mgbasa ozi maka ụlọ ọrụ onwe, gọọmentị na ọkwa niile, otu agụmakwụkwọ na nke anaghị akwụ ụgwọ. Ọtụtụ puku ndị ọkà mmụta asụsụ anyị gburugburu ụwa na otu ndị ọkachamara raara onwe ha nye dị njikere ije ozi.
Kpọọ Anyị Ugbu a: 1-800-951-5020, email anyị na translation@alsglobal.net Maka ozi ndị ọzọ, gaa na webụsaịtị anyị https://www.alsglobal.net ma ọ bụ maka see okwu gaa http://alsglobal.net/quick-quote.php anyị ga-azaghachi ya ozugbo.